बेड र अक्सिजन अभावलाई यसरी व्यवस्थित गरौँ- डा. रवीन्द्र पाण्डे कोभिड निमोनिया देखिएको अवस्थामा अस्पतालको कोभिड बेडमा भर्ना गर्नको लागि फिभर क्लिनिकले सहजीकरण गर्ने । गम्भीर सङ्क्रमितलाई अस्पतालसँग समन्वय गरेर तुरुन्त अक्सिजन बेडमा पठाउने। सोमबार, वैशाख २७, २०७८
यसकारण काठमाडौं उपत्यका जोखिममा, यसरी जोगाउन सकिन्छ ४० लाख नागरिक मंगलबार, असार २३, २०७७ काठमाडौँ उपत्यका कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिबाट अति उच्च जोखिममा परेको छ । सोमबार मात्र देशभरका कुल १८० जना सङ्क्रमितमध्ये ५४ जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको यो धेरै सङ्ख्या हो  ।
नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता र त्यसको सत्यता बिहिबार, जेठ २९, २०७७ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको‘‘नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता अदभूत छ’ भन्ने अभिव्यक्ति संसदमा दिएपछि त्यसको बहस सुरु भएको छ । संसदमा सबैभन्दा रमाइलो ठट्यौली बनेको प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति संसदहुँदै घरघरमा पुगेको छ ।
नेपालमा यो फर्मुला अनुसार संक्रमितको संख्या बढ्दैन शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ पहिले एक जना संक्रमित बढ्दा असामान्य लाग्थ्यो । आज १७० जना बढेर १२१२ जना संक्रमित भएका छन् । एक जना कोरोना संक्रमितले औसत ३ जनालाई सार्न सक्छ ।
कोरोना सङ्क्रमित महिलाको मृत्युले उब्जाएका सवाल आईतबार, जेठ ४, २०७७ उनलाई शिक्षण अस्पताल जानुपूर्व कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्छ । शिक्षण अस्पतालबाट सरेको भए सरेको ८-१० दिनमै मृत्यु हुने थिएन । सेप्टीसेमियाबाट मृत्यु भएको भए पिसिआर पोजिटिभ देखिने थिएन ।
असार साउनमा कोरोना भयावह बन्ने ! सङ्क्रमित संख्या कति हुन सक्ला ? शनिबार, जेठ ३, २०७७ हजारौं जनालाई संक्रमण हुनेछ । ती मध्ये ८५ % लाई सामान्य लक्षण देखिएर आफै निको हुनेछ । बाँकी १५ % मध्ये आधालाई अस्पतालको सामान्य उपचारले निको हुनेछ । बांखी ७-८ % लाई आइसीयु, भेन्टिलेटर आबश्यक पर्नेछ । त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात ३ % को मृत्यु हुनसक्छ । .
बिदेशमा रहेका नेपालीले कोरोनाबाट बच्न के गर्ने ? बिहिबार, चैत २७, २०७६ रोगसँग लड्ने इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुपरहर्ब जस्तै मोरिंगा, गानोडर्मा, जिन्सेन, जिंकोबाइलोबा, यार्सागुम्बामध्ये जे जे पाउनुहुन्छ, अनलाइन खरिद गरेर नियमित सेवन गर्नुहोला |
कोरोना संक्रमणबाट हामी ९८% सुरक्षित छौं आईतबार, चैत २३, २०७६ कोरोना संक्रमणबाट बालबालिका तथा युवाबर्ग सुरक्षित भएको हुँदा बच्चाको लागि आमाबुवाहरुले डर मान्नुपर्दैन ।
'नेपाल कोरोनामुक्त बनाउन तीन हप्ता अझै कडा लकडाउन' शुक्रबार, चैत २१, २०७६ आगामी ३ हप्ता विश्वको लागि निकै पीडादायी हुनेछ । संक्रमित तथा मृतकको संख्या अकल्पनीय रुपमा बढ्नेछ । यो ३ हप्ताको अग्निपरीक्षा पास गरेपछि आकासबाट आशाका किरण झुल्किने छन् ।
फड्को मार्दैछ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणले, डर मान्नुपर्दैन, ४ घण्टा सुरुमा चीनमा देखापरेको यो भाइरसको संक्रमण अहिले चीनबाहिरका मुलुकमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्यय संगठन ९डब्ल्युएचओ०ले यस भाइरसको संक्रमणलाई ‘महामारी’ घोषणा गरिसकेको छ।
कोरोना संक्रमण : आत्तिनु नपर्ने भयो मंगलबार, चैत १८, २०७६ कोरोना संक्रमणको निदान तथा उपचारमा धेरै प्रगति भइरहेको छ |-छिमेकी देश भारतले कोरोना परीक्षण किटको सफल प्रयोगपछि ठूलो संख्यामा किट निर्माण गरिरहेको छ | १०० भन्दा धेरै कोरोना भाइरसका बिरामी भारतका अस्पतालमा उपचार पछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।